China JY-131M rọba silicone mmiri mmiri maka ịkpụzi ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | Juyou
Debe ihe dị nro ma na-agbanwe agbanwe n'okpuru ọrụ ogologo oge n'oge -65 ° C ~ 200 ° Ezigbo ihe ọkụ eletrik na nkwụsi ike mmiri Nguzogide mmiri, nkwụsị ozone, ịka nká, enweghị ike ịla n'iyi, enweghị mmeghachi omume na enweghị nsí na enweghị ụtọ. elu nghọta, magburu onwe-ebu-atọhapụ ike na mfe ime
Debe ihe dị nro ma na -agbanwe agbanwe n'okpuru ọrụ ogologo oge n'oge -65 ° C ~ 200 °
Ezigbo ihe onwunwe eletriki na nkwụsi ike kemịkal
Mmiri na-eguzogide, nkwụsị nke ozone, ịka nká na-adịghị ahụkebe, na-anaghị emebi emebi, anaghị emeghachi omume na anaghị egbu egbu na enweghị ụtọ.
Mbelata ahịrị dị larịị, nghọta dị elu, ikike ịwepụta ebu dị mma yana ịrụ ọrụ dị mfe
Ịkpụzi nkenke, dị ka polyurethane, epoxy resin;
Maapụ nha ihe kemịkal, ihe mejupụtara carbon carbon na akụkụ igwe;
POLYSTER, ER-OXY na PU foamex mere ihe ngosi nka na ịchọ mma;
Ime kandụl nka na ịchọ mma na ịkpụzi gypsum;
Ịkpụzi arịa ụlọ na igwe eletrọnịkị
N'ihi na -eme elu ekweghị ekwe na ogologo na -arụ ọrụ ndụ roba na mpe mpe akwa isi.
Ndụ ite, 25 ℃
Oge mkpachapụ anya, na 25 ℃
Oge mkpachapụ anya, na 60 ℃
Oge ịkpa oke, na 80 ℃
Akwara mmiri siri ike
Data dị n'elu bụ naanị maka ntụnye.
(Ọnọdụ nkwadebe nlele nlele: 24h*na ụlọ okpomọkụ ,80 ℃ × 60 nkeji)
Nkọwa: tupu iji, agwakọta nke ọma A na B siche
Ịtụ: tụọ A na B dị ka A: B = 10: 1.
Ngwakọta: agwakọta ihe abụọ ahụ nke ọma, ọ ka mma iji akụrụngwa ngwakọta rọba pụrụ iche (dị ka obere mkpali mbara ala). Ọ bụrụ na ejiri aka na -agwakọta rọba, hụ na agbachapụrụ ala na akụkụ nke ịgbà ahụ nke ọma.
Defoaming: na -etinye rọba a gwakọtara ọnụ na akụrụngwa pụrụ iche ka ọ na -agbada n'okpuru agụụ, ma ọ bụ ị nwere ike tinye rọba agwakọtara ọnụ yana ngwakọta ngwakọta pụrụ iche n'ime agụụ defoam akụrụngwa na defoaming. N'oge ndụagụụ ngagharị defoaming, ọkwa mmiri mmiri nke ngwakọta ga-adị elu karịa ugboro 3-4 karịa ka ọ dị na mbụ. Mgbe afụ ahụ mebiri, dobe yaagụụ maka minit 4-6. N'ikpeazụ hapụagụụ.
Akpụzi Ndinam: Liquid injection ịkpụzi(LIM) na -atụ aro. Gbanye ihe na -aba ụba n'ime ụlọ ịkpụzi, mgbe awa 24 gachara n'ime ụlọ, mgbe ahụ ị nwere ike nweta ụdị rọba silicone. Ọ nwere ike ịgbatị ebu ọrụ ndụ mgbe ịgwọ vulcanized silicone roba ebu 2 awa n'okpuru 80-100 ℃. Iji meziwanye ịkpụzi arụmọrụ, enwere ike ịgwọ ya n'okpuru oke okpomọkụ nke 60 ℃ -90 ℃
Ihe ndị akọwapụtara, ngwakọta, onye na -eme ihe na -adịghị mma na plasticizer ga -emetụta vulcanization nke JY131M gụnyere:
Organic tin na ngwakọta metallo-organic ndị ọzọ
Silicone roba nwere organic tin catalyzer
● Sọlfọ, polysulfide, polysulfone ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere sọlfọ
Ine Amine, carbamate ethyl ma ọ bụ ihe nwere amine
Pla Plasticizer hydrocarbon nke na -adịghị edozi ahụ
Nchacha ntụ ntụ
Ọ bụrụ na ịmaghị ma ihe (A) ga -emetụta vulcanization, ị nwere ike ịme obere nnwale nnwale. Ọ bụrụ na enwere ihe mmiri mmiri ma ọ bụ ihe na-adịghị asọ oyi nke dị na A na gel. ọ na -egosi na ọ naghị agbanwe agbanwe na ọ ga -egbochi ịkpa agwa ọjọọ.
Akụkụ A na akụrụngwa B anaghị egbu egbu. ọ dịghị mkpa ịme ihe mgbochi pụrụ iche, naanị ihe ọ chọrọ bụ ịdị ọcha ụlọ ọrụ.
Ihe na -eme ka catalyzer dị mfe nsị ma kwụsị ọrụ, pls zere ịkpọtụrụ nitrogen, phosphorus, ogige sọlfọ na ngwakọta ọla dị arọ, dị ka tin tin. Debe arịa dị ọcha.
Oge ọrụ nke JY-131M agwakọtara ga-emetụta oke okpomọkụ gburugburu ebe obibi. Oge ọrụ ga -ebelata na oke okpomọkụ.
A na -akwakọba akụrụngwa A na ihe mejupụtara B na gbọmgbọm 200kg na drum 20kg plastik iche, ma ọ bụ ngwugwu nkọwapụta ndị ọzọ.
Nchekwa ngwaahịa na njem
Ekwesịrị ịchekwa ngwaahịa a n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ nke 0 ～ ～ 30 ℃. Ndụ shelf bụ afọ 1 n'okpuru nkwakọ ngwaahịa mbụ. A ga-ebupu ya dịka ngwongwo ndị na-adịghị ize ndụ.
Nke gara aga: JY-905 akpụkpọ anụ ịme anwansị silicone roba
Osote: JY-988 rọba silicone mmiri maka akwa